Ndụmọdụ na Ndụmọdụ maka Fallout Shelter | Akụkọ akụrụngwa
Ndụmọdụ na ndụmọdụ maka Fallout Chebe
fallout Chebe eruola nyiwe ngwanrọ ụbọchị ole na ole gara aga, mana ọtụtụ nde ndị ọrụ egosiworị na ha nwere mmasị na aha a pụrụ iche maka ngwaọrụ ha nwere ọgụgụ isi, na ọ ga-abụ ihe mkpuchi na ịnabata ọbịbịa nke atụmanya siri ike. fallout 4 a PlayStation 4, Xbox One y PC.
Ọ bụrụ na ị wụnyela fallout Chebe na ngwaọrụ gị ma ịchọrọ inwe ọrụ dị ogologo ma dị ebube nke na-elekọta ebe mgbaba gị, ọ gaghị adị mfe. Nwe Bethesda anọwo na-elekọta ịkwadebe ndepụta nke ndokwa y consejos nke mere na ebe obibi gị na-ebi na mgbasawanye, mmepụta na mmepe mgbe niile.
Jikere maka ọdịnihu
Mepụta ụlọ ndị dị n'ụlọ gị nwere ike ibute ọgba aghara mgbe ọnụọgụgụ mmadụ na-aba ụba. Otu azịza ya bụ ijikọ ọnụ ụlọ nke ụdị dị otu, ebe nke a ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ịnakọta akụrụngwa ma nyefee ndị bi na ya. Gbalịa igwu ala ozugbo i nwetara ego. Debe osisi abụọ maka akụ ọ bụla: nri, mmiri na ume. Ọ bụrụ na ị wuo ime ụlọ atọ sara mbara n'akụkụ igwe mbugo na ọnụ ụlọ abụọ sara mbara n'akụkụ ya, ị ga-enwe ohere zuru ezu maka igwe mbugo ọzọ na njedebe nke ala ahụ, n'akụkụ n'akụkụ ọnụ ụzọ mbata ahụ. Tinyegharịa usoro a maka akụ ọ bụla na ị ga-enwe ihe niile a haziri ahazi n'otu ebe, gbakwunyere oghere atọ efu maka ebe obibi aka ekpe nke mbuli n'akụkụ ọnụ ụzọ.
Agbasawanye nke ukwuu
Buru n'uche na ihe dị n'elu bụ atụmatụ dị ogologo oge! Jide n'aka na ị na-ewepụta oge iji wuo ya n'ụzọ, n'ihi na ebe a arụmọrụ bụ ezigbo isi ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ị gbasaa ngwa ngwa, ọ ga-esiri ike ijikwa akụ gị ma mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ.
Jikọta ọnụ ụlọ mgbe ọ bụla i nwere ike
Ọ bụrụ na ị wuo ime ụlọ nke otu ụdị na-esote onye ọzọ, ụlọ abụọ ahụ ga-ejikọ aka na obosara nke atọ. Ijikọ ọnụ ụlọ nwere nnukwu abamuru: Ndị bi na ha na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ na-enwe obi ụtọ ma na-arụpụta ihe karịa, yabụ itinye mmadụ isii iji rụọ ọrụ ọnụ baara mmadụ niile uru. Ọzọkwa, ka ọtụtụ ndị bi na ị nọ n'ime ụlọ ọzụzụ, ha niile ga-azụ ngwa ngwa.
Ewelitela ụlọ tupu oge eruo
Ọ bụrụ na ị na-achọ iwu ụlọ ọhụrụ n'ime ime ụlọ kwalitero, ha ga-ekewapụ ruo mgbe ị ga-ewelite ụlọ nke abụọ na ọkwa nke mbụ. Nke ahụ pụtara na ị ga-atụfu arụmọrụ niile ị ga - enweta n'ime ụlọ jikọtara. Mgbe ọ bụla enwere ike, kechie ha ọnụ tupu ị nweta nkwalite.
Kwee otu onye bi na nke ọ bụla n’ime ụlọ
Ndụ mgbe apocalypse siri ike: ekwela ka onye ọ bụla kọọrọ gị ma ọ bụghị. Site n'ebe ahụ, ụdị nsogbu atọ dị iche iche nwere ike ịdabara ndị bi na oge ọ bụla. Ime ụlọ nwere ike gbaa ọkụ, nke bụ ihe ihere. O nwekwara ike iji radroaches na-eme ihe, nke ka njọ. Ndị na-apụnara mmadụ ihe nwere ike ịwakpo ụlọ ahụ dum, nke ga-abụrịrị ịdị elu nke ọdachi. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ịkwadebe maka ihe ndị a niile. Nke mbu, oku: oku di nfe. Ndị bi n’ime ụlọ na-enwu ọkụ ga-ewepụta ihe emenyụ ọkụ na-enwu ọkụ. Otú ọ dị, Radroaches bụ akụkọ ọzọ: denizens na-enweghị ngwa agha nwere ike zọda ha, mana ọ na-ewe ogologo oge ma mechaa jupụta na denizens merụrụ ahụ. Ihe yiri nke a na-eme ndị ohi, ọ bụ ezie na ha ga na-agagharị na ebe mgbaba ahụ ruo mgbe ha kwụsịrị. Zọ kachasị mma iji kwụsị ndị mwakpo abụọ a bụ ngwa ọgụ. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ji ngwa ọgụ, mana opekata mpe bụ na ọ dịkarịa ala otu onye bi n'ime ụlọ nke ọ bụla na-ebu ngwa ọgụ.
Elegharala usoro mbu nke nchebe
Ọ ga-ewe oge iji kesaa ngwa agha ahụ, yabụ ịnwe ngwaahịa nke nchekwa na ịmịcha enyere gị aka ịkwadebe ndị bi na gị na mberede. Kwadebe onye ọ bụla na-eche ihu na Ravens ma ọ bụ Raiders na ngwá agha ma weghachite ha ọkpọ mgbe ihe ahụ mechara. Enwere aghụghọ maka mgbe ị chịkọtara ngwa agha ole na ole: Na mgbakwunye na ịnwe ụfọdụ na nchekwa, jupụta ime ụlọ mbụ n'aka nri nke ọnụ ụzọ vault na ndị bi na-ebu ngwa agha. Nke a ga-abụ ụlọ izizi ndị loot batara mgbe ha na-abanye n'ọnụ ụzọ ahụ, ma ọ bụrụ na ị gbasoro ndụmọdụ ahụ, ọ ga-abụ ime ụlọ nwere obosara atọ nwere ndị bi isii na-eche njikere ịkwụsị ndị na-apụnara mmadụ ihe ozugbo. I nwekwara ike tinye ndị nche abụọ n'ọnụ ụzọ, mana ị nwere ike ọ gaghị achọ ha ma ọ bụrụ na enwere ngwa agha zuru oke n'ime ụlọ mbụ.
Na-agagharị n’ala tọgbọrọ n’efu mgbe niile
Ọtụtụ ihe ga - eme ga - eme dịka ebe nchekwa gị na - agbasawanye, nke pụtara na ị ga - achọ ọtụtụ ngwa agha. Maka nke a, ị ga-ezipụ ndị bi na ya ka ha gaa hụ ala ịkpa ahụ, ebe ha nwere ike nweta ụdị ngwa agha ọ bụla. N'ezie, nke ahụ pụtara na ị ga-enwe ma ọ dịkarịa ala otu ezigbo ngwa agha na otu ezigbo uwe na-arụsi ọrụ ike nwa oge (n'ihi na ị ga-eziga ndị bi gị jiri akụrụngwa kachasị mma, nri?), Mana uru karịrị akarị.
Ekwela ka anyaukwu buru gị
N'ụzọ doro anya, enwere ọtụtụ ihe egwu karịrị ọnụ ụzọ ọdụ ụgbọelu, yabụ na mgbakwunye na ịkwadebe ndị na-agụ scout na akụrụngwa kachasị mma (yana ọtụtụ ihe na-akpali akpali na RadAways dị ka ị nwere ike), ị ga-achọ ịlele oge ya Ọ bụrụ na ọ dị ka ihe na-adị oke ize ndụ ebe ahụ (ọkachasị ma ọ bụrụ na ha dị obere na ahụike ma ọ nweghị ihe na-akpali akpali), kụrụ bọtịnụ Laghachi na onye bi na gị ga-ala. Agaghị enwe ihe egwu na nloghachi, nke dị mma, ọ ga-ewe ọkara oge ọ were gị ịhapụ na mbido, nke ka mma. Enwela oke ụjọ banyere ịhapụ onye bi na mbara ala ahụ ogologo oge - ọ bụrụ na onye bi ebe ahụ taa ájá mgbe ị na-a payingaghị ntị, ịnwere ike ịtụte ha site na itinye akara.
Gbalịa imezu ebum n’uche gị
Na menu Pip-Boy ị ga-ahụ akara ngosi dị ka ihe ịchọ mma. A ga-enwe ebumnuche gị: ndepụta nke ebumnuche nke, ọ bụrụ na i ruo ha, ga-ewetara gị ezigbo mkpọ nke baajị (ma ọ bụ, oge ụfọdụ, igbe nri ehihie jupụtara na ngwa ahịa adịkarịghị elu). Mezu ebumnuche nwere ike ịmepụta usoro ego ọzọ, na mgbakwunye na akụrụngwa ndị ọzọ (ma ọ bụ ọbụlagodi ọkwa dị elu na ngwa ọgụ ndị na-adịghị ahụkebe), nke ị ga-ahụ n'ime igbe nri ehihie.
Abụla ohu nye ihe mgbaru ọsọ gị
Site n'ebe ahụ, oge ụfọdụ ị ga-enweta ihe mgbaru ọsọ nke na-ekwekọghị n'ihe mgbaru ọsọ gị ugbu a. Ọ dịghị ihe na-eme! Otu ugboro n'ụbọchị, ị nwere ike tufuo otu ebumnuche atọ wee nweta nke ọhụrụ. Ma echegbula onwe gị oke ọbụlagodi ma ị jirila ọrụ gị niile. A ga-emecha ọtụtụ ebumnuche site na egwuregwu nkịtị. Cheta ichikota ugwo olu gi iji nwee ike ime ihe ohuru!
Kpọkọta ndị bi na gị
Iji tolite ebe obibi gị, ị ga-achọkwu ndị bi. Nsogbu ya bụ na ala ịkpa ahụ adịghị ejupụta na ndị na-achọ ụlọ. Yabụ, iji gbasawanye ebe obibi gị, ị ga-achọ ndị ga-ebi gị ka ha nwee ọhụụ. Naanị ị ga-eziga onye bi na ebe obibi ka ị banye n'ụlọ obibi ma hụ otú ha si na-agba ume na, ahem, otu ihe na-eduga na nke ọzọ. The elu gị Charisma fim, na ngwa ngwa… ihe ga-eme. Ha ga-eme n'ezie, belụsọ na di na nwunye ahụ metụtara. Na hey, lee! Ime ozugbo! N’oge na-adịghị anya, ị ga-enwe onye obibi ọhụrụ (ma ọ bụ onye obibi), onye ga-agagharị na ebe obibi ahụ ruo mgbe ọ toro ma nwee ike ekenye ya ọrụ.
Enwere ihe ole na ole ị ga-ebu n'uche tupu ịmalite nnukwu nnwale ozuzu. Nke mbu: cheta na ndi bi na onodu ezi olile anya gha agbanari ihe mberede obula ichebe nwa ha, ya mere ime ulo juputara na ndi bi noo nani ga enwe nchekwa. Nke abụọ: cheta na ndị ezinaụlọ agaghị eme ihe ọzọ karịa nkata mgbe ezigara ha ebe ha ga-arahụ, yabụ gbaa mbọ hụ na di na nwunye ahụ anaghị enwe mmekọ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịba ụba mmadụ. Nke ato: buru n'uche na, ka ebe mgbaba gi na-eto, o nwere ike isiri gi ike icheta onye bu onye ikwu gi ma obu onye puru iche na agwa puru iche iche iche. chọta onye ị chọrọ mgbe niile, yana ị nwere ike ịnye aha ọ bụla bi na ya mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Ndụmọdụ na ndụmọdụ maka Fallout Chebe
Ebe na otu esi zụta OnePlus 2 na-enweghị oku
Ihe iri na-akpachapụ anya nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile na-eme na thentanetị na anyị ga-edozi taa